i-aluminium inokuphinda iphinde isetyenziswe umatshini wokuqhafaza i-aluminium
Ikhaya / I-Induction Fusion Furnace / I-Aluminium yoMngci / IAluminiyam inokurisayikilisha umatshini
I-aluminium ingenza umshini wokusebenzisa izinto
iindidi: I-Aluminium yoMngci, I-Induction Fusion Furnace, Ukuthungulwa kweTyunte tags: U-Al unokuphinda aphinde aphinde aphephe isithando somlilo, IAluminium iyakwenza kwakhona, I-aluminium iyancibilika, i-aluminium inokukhathula isithando somlilo, I-Aluminium inokuphinda isetyenziswe isithando somlilo, I-Aluminium inokuphinda iphinde isetshenziswe isithandle somlilo, I-Aluminium iyakwenza kwakhona umatshini
I-200 ephezulu ^ 1200kg Induction I-Aluminuim Ingakwazi Ukuphinda I-Recycling Machine ukuze iphinde iphinde idibanise i-aluminium, isots, amathane kunye namafutha.
I-aluminium / i-ingots / iikhenni eziphinda ziphinde zenziwe ngokutsha izithuthi ziza kufaka izixhobo ze-aluminium okanye i-aluminium ingot / i-scrap njengento ehlawuliswayo ekutheni i-aluminium ishicilelwe isithandisi somlilo kwaye iqale isithando somlilo ukuqala inkqubo yokuqhaqhaqha. Ukongeza i-aluminium eninzi le nkqubo icebisekile njenge-aluminium encibilikisiwe idlulisa ukushisa okungcono.
Xa ukushisa kwe-aluminium kufinyelela kwi-1220.66 ° F kuguquka. Naliphi na intsalela ekubambeni kunye nokupenda kwimikoko iya kuhamba phezu komhlaba. Le nxalenye ibizwa ngokuba yi-dross kwaye inokuthi igqitywe yileyensi yensimbi. Oku kufuna ukupholisa ngaphambi kokuba ilahlwe ngokukhuselekileyo.
Emva koko, i-crucible (itsimbi) iya kuthulula i-aluminium ecocekileyo. Ngokuqhelekileyo, indlela yokuguqula i-Hydraulic isilungiselelwe ukuthulula ubuninzi bezitya zombane.
Ekugqibeleni, ngononophelo, i-aluminium etyhidiweyo iya kuthululwa kwisibumba ukuze ipholile phantsi ize idibanise ukusetyenziswa.
AIingxowaniselo ze-aluminium yokufakelwa ziyakwenza kwakhona umatshini:
1, gcina amandla kunye nokunciphisa ukushisa kwendalo
I-workshop yokuqala yombutho we-diesel ngokungcola, kodwa kunye nombhobho oncedisayo wokungcola, ngaphakathi nangaphandle kwitshoni yokushisa komlilo inenani elikhulu lokusabalalisa kwi-workshop, okubangela ukusebenzela i-workshop ephezulu. Ngaloo ndlela isithando sokuqala somlilo, ininzi yokuphunyuka emoyeni, kukho ukulahleka kokushisa, ukuveliswa kwamandla amakhulu, ukwandisa iindleko zemveliso. Ngelo xesha, iqondo lokushisa eliphezulu liyakhula. Inkqubo yokufudumala yokufakelwa kwe-electromagnetic, i-element thermometer iyashisa ngokutsha, ukwenzela ukunciphisa ukulahleka kokuqhuba ukushisa, ukufudumeza ngokukhawuleza, ukunyibilika ngokukhawuleza, ukwenjenjalo ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Ukunciphisa ukusetyenziswa kombane. Emva kokuthelekiswa kovavanyo lokulinga kunye nokuguqulwa, umphumo wokugcina amandla ngu-20% -40%.
I-2, ukufudumeza ngokukhawuleza, ulawulo lokushisa oluchanekileyo-ixesha langempela
Ukuchithwa kwe-electromagnetic heating Indlela yokusebenzisa i-magnetic field lines yenza ukufudumeza ngokukhawuleza ngokukhawuleza, i-altingum Alloy Alloy. Ulawulo lokushisa lixesha elichanekileyo kwaye lichanekile, eliphucula umgangatho weemveliso kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle!
I-3 kunye nobomi benkonzo ende, ukugcinwa okulula
Indlela yokutshisa i-furnace yombane yokusetyenziswa kombane yindlela yokufudumala ifowuni, ukucoca ukucoca ucingo, ukuxhaswa kwentambo kwindawo ephakamileyo yokushisa ixesha elide ekusebenziseni i-oxidation kuya kubangela ukunciphisa ubomi bentsebenzo, iindleko zokugcina eziphezulu. I-coil yokufudumeza i-electromagnetic yenziwe ngezinto ezikhuselayo kunye nobushushu obuphezulu, ngoko ke ubomi benkonzo bude kwaye kungekho naluphi na ulondolozo.
I-electromagnetic induction heatout kunye nophuhliso lwe-teknoloji, inkqubo yokuvelisa kunye nobugcisa bezakhi, isofthiwe, njengokukhuselwa okuthembekileyo kwamandla angoku, i-2-200KW.
Umzekelo wesibonelelo ufumana ukufudumezwa kwe-electromagnetic heat-induction, oku kunokunciphisa ubushushu bomhlaba womshini, kwaye umzimba womntu unokuthi uthinteke ngokukhuselekileyo, ukwenzela ukuba ugweme ukuqhuma ukutshiswa nokutshabalalisa izingozi ezibangelwa yimoya yokufudumala kunye nokukhusela ukhuseleko lomveliso yabasebenzi.
Ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo, izixhobo ze-IGBT zaseJamani, ukuthembeka okuphezulu, ukusebenza okuzinzileyo kunye neendleko zokugcina eziphantsi.
2) ubukhulu besigaba segedijithali esitshiyelwe ukulandelela i-loop, ukulandelelana kwe-impedance yokulayisha ngokuzenzekelayo.
Ulawulo lwe-3 amandla avaliweyo-loop, ukuphepha ukutshintsha kweqondo lokubangelwa ngamandla.
4) ngaphezu kombane, phantsi kwethamo, ukungabi nako kwesigaba, ngaphezu kwamanje, ngaphezu kokukhusela ukushisa, ukubonakaliswa kwexesha langempela kweerameters, ukuxilongwa kwephutha kunye ne-alarm; ukuvuza i-alamu ngokuzenzekelayo, ukunqumla ukunikezelwa kwamandla kunye nomsebenzi osebenzayo wokubonisa ixesha langempela.
I-5) Inkqubo yokulawula ukufudumala kwe-PID, ukushisa okushisa okufanayo, ukuthintela ukushisa kwe-aluminium echitshiweyo, ukutshisa ngaphantsi, izakhi zentsimbi ehambelana nomgangatho wokuphucula izinga lemfundo yemveliso.
I-6 (i-LED) yokulawula ukushisa kwedijithali, ukulinganisa nokulawula ukuchaneka kweqondo lokufika kwi-3 degrees centigrade, umgangatho wesobho wesilungileyo, ukushisa kwe-aluminium kuphuma ngokukhawuleza, ukushisa kwesithando kulula ukulawula, ukukhangela kombane kuphezulu;
I-7) isakhiwo esiqingqiweyo se-polycrystalline fibers of fire, isantya esincinci, ipropati egciniweyo yokusetyenziswa komhlaba, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukusebenza kakuhle, ubushushu obuphezulu ngaphezu kwe-1200 degrees, ubomi besikhathi eside;
8. Ukusebenza kulula kwaye amandla angatshintshwa nomsebenzi;
9 (100%) ixesha lokulayisha, amandla amakhulu, ukuqinisekisa ukusetyenziswa kweeyure ze-24.
Ukuxutywa komthamo we-SMJD uchungechunge lwe-electroduction aluminium inokutshayela kwakhona umatshini:
uhlobo igalelo Power Ukuxhamla amandla Ukushisa okuphezulu
isinyithi, insimbi engenasici ubhedu, igolide, isiliva (i-Slag) aluminium, i-aluminium alloy,
I-Aluminium scrap, i-aluminium slag, i-pop inakho
SMJD-463 I-60 KW 200 KG 500 KG 200 KG
SMJD-480 I-60 KW 150 KG 500 KG 150 KG
SMJD-580 I-80 KW 200 KG 600 KG 200 KG
SMJD-600 I-60 KW 230 KG 560 KG 230 KG
SMJD-900 I-120 KW 300 KG 900 KG 300 KG
SMJD-905 I-80 KW 300 KG 900 KG 300 KG
SMJD-1250 I-80 KW 400 KG 1200 KG 400 KG
SMJD-1250 I-120 KW 450 KG 1350 KG 450 KG
SMJD-1500 I-120 KW 500 KG 1500 KG 500 KG
SMJD-1550 I-120 KW 520 KG 1560 KG 520 KG
I-Aluminium Iimpawu zokuSebenza ngokuNyunjwa
I-SMJD induction i-parameter yomlilo
I-aluminium, iCopper, i-Iron Induction Inyibiliko ye-Furnace manual
Ukuqhaqhazela i-furnace yegolide ngokuchithwa